Ciyaartoyda Xulka qaranka Soomaaliya oo billado dahab ah ka soo hooyay tartan caalami ah… + SAWIRRO – Gool FM
Ciyaartoyda Xulka qaranka Soomaaliya oo billado dahab ah ka soo hooyay tartan caalami ah… + SAWIRRO
(Muqdisho) 16 Maarso 2019. Ciyaartoyda Xulka qaranka cayaaraha fudud ayaa guul taariikhi ah ka soo hooyay tartan cayaaraha fudud oo lagu qabtay dalka Djibouti, waxayna kala soo qaateen labo billadood oo dahab ah iyo kaalimo kale oo wanaagsan.
Tartankan cayaaraha fudud ee Djibouti International Meeting oo da’yarta iyo waa weyn u qaybsanaa waxaa Soomaaliya u tartamayay 5 ciyaaryahan oo labo qayb ku kala tartamayay waxaana wafdiga cayaartoyda qaranka hoggaaminayay Guddoomiyaha Guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed Mudane Cabdullaahi Axmed Tarabi oo ay wehliyaan Guddoomiyaha xiriirka cayaaraha fudud, Khadiijo Aadan Daahir iyo Guddoomiye ku xigeenka xiriirka cayaaraha fudud, Faarax Cali Macallin.
Haddaba halkaan hoose ka aqriso tartammada ay cayaartoyda ka qayb galeen iyo natiijada ay keeneen:-
>- Cabdi Salaan Axmed Maxamed oo ku tartamay orodka 800 mitir ayaa kaalinta koowaad ka galay kaddib markii uu ku oraday 1:55 ilbiriqsi, waxaaa lagu abaal-mariyay billadda dahabka.
>- Cabdullaahi Jaamac Maxamed oo orodka 1500 mitir ee dhanka da’yarta u tartamayay ayaa kaalinta koowaad isna ku dhamaystay kaddib markii ku orday 3:46:78 wuxuuna sidaaasi ku hantay billadda dahabka.
>- Cabdirashiid Yuusuf oo dhanka da’yarta orodka 800 mitir ku tartamayay ayaa isna ka soo galay kaalinta 6-aad ee tartanka.
>- Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Orodka da’yarta 3,000 mitir ka qayb galay ayaa bandhigiisa aad u wanaagsanaa waxuu soo galay kaalinta afaraad kaddib markii uu ku orday 8:36 ilbiriqsi isagoo ku dhowaad inuu hanto biladda maarta.
>- Cali Iidow Xasan oo qaybta ciyaartoyda waa weynka ku jiray ayaa kua dhamaystay kaalinta 7-aad ee tartanka qaybtiisa 1500 mitir waxuuna ku orday 3:49, taasoo ahayd saacad wanaagsan.
Dhammaan ciyaartoyda ayaa marka laga soo tago guulaha iyo kaalmaha ay galeen waxay sameeyeen saacado wanaagsan.
Cayaartoyda Xulka qaranka cayaaraha fudud ee guulaha keenay ayaa xero tababar oo gudaha dalka waxaa sanadkii 2017 ugu diyaariyay Guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed, halkaas oo ay tababar ku qaadanayeen muddo sanad ah, waxaana kaddib loo wareejiyay dalalka Kenya iyo Ethiopia si ay tababarro heerkoodu sarreeyo u helaan taasoo sahashay guushan taariikhiga ah.
“Horyaalka Premier League kama bixi doono gacmaheena” - Raheem Sterling
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo dadaallo ugu jira horumarinta ciyaaraha Gobollada… + SAWIRRO